Update Date ဩဂုတ် 25, 2020 .2mins read
သားဥကြွေ တဲ့အချိန်ဟာ ကိုယ်ဝန်လိုချင်တဲ့သူတွေရော၊ တားချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ အရေးကြီးပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ကျန်းမာရေးကိရိယာမှာ တွက်ချက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 8, 2020 .2mins read
မသင့်တော်တဲ့ လိင်ကိစ္စတွေကို လုပ်ချင်နေတဲ့ အတွေးတွေ ပေါ်နေတယ်။ မလုပ်သင့်မှန်းလည်း သိရက်နဲ့ ခဏခဏ တွေးနေမိတယ်ဆိုရင် sexual OCDကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 7, 2020 .3mins read
သုက်ရည်ဟာ မျိုးပွားမှုမှာ အဓိကကျပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျ ရောဂါအမျိုးအစားမဟုတ်ပဲ ရှားပါးတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးအဆစ်နဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး, အရိုးကျိုးခြင်း နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 18, 2020 .2mins read